काजललाई के रोग लाग्यो ? लेख्छिन् –‘यो मेरा लागि निकै मुश्किल’ – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. काजललाई के रोग लाग्यो ? लेख्छिन् –‘यो मेरा लागि निकै मुश्किल’ – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
काजललाई के रोग लाग्यो ? लेख्छिन् –‘यो मेरा लागि निकै मुश्किल’
दक्षिण भारतीय तथा बलिउडमा अभिनेत्री काजल अग्रवाल सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहेकी छन् । उनी आफ्नो साना–साना जानकारी पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो फ्यानहरुलाई जानकारी गराईरहेकी हुन्छिन् ।
हालै काजलले इन्स्टाग्राममा आफ्नो नयाँ तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छिन् जसमा उनले आफ्नो रोगबारे खुलासा गरेकी छिन् । काजलले इन्स्टाग्राममा आफ्नो तस्बिर सार्वजनिक गर्दै आफूलाई दम भएको जानकारी दिएकी छिन् साथै उनले इन्हेलरको महत्वमाथि पनि जोड दिए । काजलको पोस्ट पढेर प्रशंसक उनीसँग निकै प्रभावित भएको पनि देखिएका छन् ।
काजल लेख्छिन्, ‘जब मलाई पाँच वर्षको उमेरमा आफूलाई ब्रोन्कियल अस्थमाबारे थाहा भयो तब मलाई राम्रोसँग याद छ कि त्यतिबेला मलाई मनपर्ने खानबाट बन्देज लगाइएको थियो । के तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ कि एक बच्चाका लागि दुधबाट बनेको सामान र चकलेटबाट टाढा बस्न कति मुश्किल रह्यो होला । यो मेरा लागि निकै मुश्किल थियो र यो पनि होइन कि जब म हुर्किदैँ गएँ तब मेरा लागि सबैकुरा सहज हुनथाल्यो ।’
काजल अगाडी लेख्छिन् ‘यात्रा गर्दा मलाई धुँवा धुलोजस्ता चिजले अत्यधिक तनावमा पार्ने गर्दथ्यो । मेरो दमको रोग बढ्न थालेको थियो । धुँवा धुलोमो हुँदा मलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्थ्यो । त्यसपछि मैले यो समस्याबाट निजात पाउनका लागि इनहेलर राख्न सुरु गरेँ । जतिबेला मलाई सास फेर्न समस्या हुन्छ, तब म यसको प्रयोग गर्छु ।’
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको February 12, 2021 February 12, 2021 151 Viewed